25 January, 2011 in Maqaallo by Baidoanews Webmaster
Kuligen kulmigna koona manoo dhiman , shirkaan waxaa isugu imaadey intii DM wadaniyiinta heyd intii ka damqaneysey dhibaatda Raxweyn, intii samada jacleyd , intii horumarka iyo wanaaga qowmiyada ka shaqeyneysey waana shir loo dhan yahay ee keerow adi
Waxaa iga soo bixiyey Tikit-ka koo Aan saaxiibo aheyn oo Kaahiye la yiraahdo kuwuu igu yiri kenya war ka keen?
kuwa kale ee kula socdeyna maxay ahaayeen?
kuwaas waa kuwo uu taageero ka raadinayo Keerow oo uu rabo inuu dadka ku indha sircaado kuwaan xildoonka ah ee isugu imaadey kenya, waxaanu daawaney shaley hees macaan iyo calaman loosoo sameeyey dowlada aan dhisirabno.
Keerow sxb adiga degdegsiiyaha daa ee yaa lakasaayo ee kasoo qeybgaley kulunkaan, Sheekh Iyo SHariifaa Jooga, Xildhibaanadii kushubada ahaana kama maqna , ururo bulsho waxaa noo matalaya Xaaskii SHaaty iyo Tii Dhaalib.
Oo gabdhaha maxaad meesha u keensateen xildhibaanda lagartee? waraa adiga weligaa jookoma ciyaarin war dad badan ayaa waxay ku Aaminsan yihiin ragii gabdhahaasi qabey,laakiin hada waxy dad badan ku qanci doonaan muuqaalka ay meesha ka dhex muuqadaan gabdhahaasi marnanoo matalaya ururo bulsho rayid marna siyaasiyiin.
Aawey Malaaqyadii Iyo Aqoonyahanadii hadii aad wax dhiseysaan sxb 30 qof maa dowlad dhiseysa oo qowmiyad matali karta oo caado qaatiyaal ah?
Dabaalyahow aamus ninba ninuu wataa ee anageyba naga tolantahay dhexdeena hada , waxaa qolo ay rabaan in la xoojiyo oo aan wax kale lasameynin wax dowlada ah ee la taageero tii Jubaland, koo wuxuu wataa koo heysta dhalasho Australian ah maba imaanin kulanka, toona waxay rabtaa koo qaraabada ah oo hees macaan soo bandhigey, aniga anaa is wado ee kee wax noqonkara marka?
Sakiintii Balaayada aheyd ayaa dadka lagu kala jeex jeexi rabaa KEEROW ee adiga iska ilaali, kkkkkkk waa sidaa kuwii Doolow waaba la qanciyey waxaa la yiri abaaraan ka hadleynaa, waana idin soo marayaa tookadaan loool sidoo kale wey naga degeen kuwii dibadana waxba la madhisayo ayaa la yiri laakiin wey nootaalaa maantaa lakala baxayaa.
Keerow Kenya, Baidoanews
Maxaa kala socotaa ololaha ay beesha Murusade ka wado Baraha Bulshadda Iyo Sheekooyin Ka Yaabinaya?
Nin Dalaal ahaa oo Lagu diley tuulada Yaay Kooyow Bakool
Taxanihii Aw Keerow & Qalinkii Feysal Mustafa Sudan
DARDAARANKII AW KEEROW (Q.1AAD) & Qalinkii Feysal Mustafa
Qarah ky dhii harungty Soomaaliya Mogdishow
AW KEEROW I KURIITIS Taxanihii Aan Kala Go'a Laheyn